टिकटकबाट यसरी सकिन्छ पैसा कमाउन – Online Nepal
July 3, 2020 151
पछिल्लो समय निकैनै लोकप्रिय बनेको भिडियो एप ‘टिकटक’ले युवापुस्ता देखि वृद्ध वृद्धालाई आकर्षित गरेको छ । छोटो भिडियो निर्माण गरेर आफ्नो प्रतिभालाई समुदायमा देखाउन सकिने टिकटकलाई धेरैले मनोरञ्जनको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
म्युजिकलि नामको एपलाई चिनियाँ कम्पनीले किनेर टिकटक नामाकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि यस्को प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको हो । गतबर्ष सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको एपहरुको तुलनामा टिकटक शिर्ष स्थानमा रहेको थियो । त्यस्तै टिकटकको प्रयोगकर्ता नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लोसमय टिकटकबाटै आफ्नो पहिचान बनाएर सेलिब्रेटी बन्ने पनि लहर चलेको छ नेपालमा । धेरै टिकटक प्रयोगकर्तालाई यसबाट पैसापनि कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन होला ।
तर, पछिल्लो समय टिकटक मनोरञ्जनको लागि मात्र नभई पैसा कमाउन सकिने माध्यम पनि बनेको छ ।
कसरी कमाउन सकिन्छ पैसा ?
सेलिब्रेटी अर्थात चर्चित टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न कम्पनिको बिज्ञापन गरेर प‌ैसा कमाइरहेका छन् भने, टिकटकमा अर्को फिचर पनि रहेको छ पैसा कमाउनको लागि । तपाईं सँग हजारभन्दा धेरै साथी जोडिनु भयो भने टिकटकमा लाइभ भन्ने फिचर देखिन्छ त्यसपछि तपाईंले फेसबुक , युट्युब, इन्स्टाग्राममा जस्तै भिडियो गर्न सक्नु हुनेछ ।
टिकटकमा लाइभ गर्दा हेर्ने दर्शकहरुले इमोजी उडाउने र गिफ्ट फठाउन मिल्ने छ । गिफ्ट पठाउनलाई क्वाइन किन्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि गिफ्ट किनेर पठाउन सकिनेछ र अरुले पठाएको गीफ्ट बापत लाइभ गर्ने ब्यक्तिको खातामा पैसा आइरहेको हुन्छ ।
तर गिफ्ट किनेर पठाउने सुविधा नेपालमा भने हालै उपलब्ध छैन अन्य देशहरुबाट पठाएको गिफ्ट बराबरको रकम भने प्राप्त गर्न सकिनेछ । गिफ्ट किन्नको लागि यसरी क्वाइन लिनु पर्नेछ । यसरी पैसा कमाउन नेपालमा धेरैले सुरु गरिसकेका छन् ।
Prevअमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ – प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन !
Nextअब देखी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र पसल खुला गर्न निर्देशन
रुकुम घटनाको बारेमा सुष्मा मल्ललाइ यी युवतीको कडा जबाफ, घटना घट्नुको कारण यस्तो रहेछ (हेर्नुहोस भिडियो)
भर्खरै सीमा विवादपछि भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा उडेको उड्यै ,भारतले देखायो दा*दागिरी (भिडियो सहित)
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना संकटलाई लिएर डब्लुएचओले गर्यो अर्को यस्तो डरलाग्दो खुलासा
डाक्टर केसीलाई भेटेपछि अस्पतालबाट रुदै निस्किए हेमराज थापा ! कसैलाई नछोड्ने चेतावनी (हेर्नुहोस भिडियो)